Kekọrịta Ọnọdụ M Na IPhone - Ntuziaka Na Online Ngwá Ọrụ
Kekọrịta Ọnọdụ M Na IPhone
Chọta ntuziaka ka esi ekekọrịta ọnọdụ gị site na iPhone gị. Ma jiri ngwá ọrụ ịntanetị n'efu anyị chọta, gbanwee ma kesaa nhazi na adreesị GPS.
Okwu Mmalite na latitude na longitude na-achịkọta
Coordinhazi na Latitude na ịdị ogologo bụ otu akụkụ nke usoro nhazi ala nke nwere ike ịchọpụta ebe ọ bụla n'ụwa. Usoro ihe a na-eji mbara ụwa kpuchie ụwa. E kewara mbara a na okporo ụzọ, ihe ọ bụla dị n'elu dakọtara na ọnọdụ latitude na ịdị ogologo, dị ka isi okwu ọ bụla nọ n'ụgbọelu ụgbọelu kwekọrọ na otu achikoro na x na y. Igwe a na-ekewa elu nke ụwa ụzọ abụọ nke na-agba ọsọ dị ka ihe dakọtara na site na Ugwu Ugwu ruo na South Pole.
Uzo ndi ozo di na eha di iche na ebe ahuru na ila n’ahu odida anyanwuru anyanwu, nwere uru ha no na-adi. Ha bụ nke ọma, akpọrọ ihe ndakọrịta. Uzo a na erite n'ogo igwe ekwupụtara akoto oke okaibe 0. ingga akuku Ugwu rue Ugwu Ugwu ihe onodi latitude na-abawanye site na 0 ruo 90 n’Ugwu Ugwu. New York, nke bụ ihe dị ka ọkara n'etiti ndị na-ekwukwa okwu na North Pole nwere oghere nke 40.71455. Site na igwe ndọrọ ndọrọ na-aga n'ebe ndịda, ụkpụrụ etiti na-adị njọ ma ruo -90 na South Pole. Rio de Janeiro nwere ohere nke -22.91216.
Ahịrị ndị na-esite na Pokwụ tokwụ nke Ugwu ruo na South South nwere uru ịdị ogologo na-akwụ mgbe niile. A na-akpọ ahịrị ndị ahụ meridians. Ndị meridian nke na-akọwa ịdị ogologo nke uru 0 gafere Greenwich na England. Westga na ọdịda anyanwụ site na Greenwich, kwuo kwupụta kọntinent America, na ịdị ogologo na-adị njọ. The Longitude ụkpụrụ ọdịda anyanwụ nke Greenwich na-aga 0 ruo -180 yana ụkpụrụ ịdị ogologo na-aga n'akụkụ ọwụwa anyanwụ site na 0 ruo 180. Mexico City nwere ịdị ogologo nke -99.13939 na Singapore nwere ogologo nke 103.85211.
Ihe ngbanye latitude na longitude bu ihe ndi GPS jiri. N'oge ọ bụla na oge, enwere ike ịkọwa ebe ị dị ugbu a n'ụzọ ziri ezi site na ndị na-ahazi ohere ma ọ bụ ndị na-anya ugwu.
Ntuziaka ịkekọrịta ọnọdụ gị na ngwaọrụ na ngwa dị iche iche